बिदेश Archives - News20 Media
चीनका कारण सैन्य जोखिम बढे खुलासाः ३० शक्तिशाली देशको आपत्ति, अब के होला ?
June 15, 2021 N20LeaveaComment on चीनका कारण सैन्य जोखिम बढे खुलासाः ३० शक्तिशाली देशको आपत्ति, अब के होला ?
१ असार ३० देश आवद्ध नेटोका शीर्ष नेताहरुले बेल्जियमको ब्रसेल्समा चीनको खतराबारे छलफल गरेका छन्। नेटोको छलफलमा चीन केन्द्र बनेको यो पहिलोपटक हो। नेटोका नेताहरूले चीनका कारण सैन्य जोखिम बढेको चेतावनी दिँदै चिनियाँ पछिल्ला कार्यलाई प्रणालीलाई चुनौती दिने व्यवहार भनेका छन्। उनीहरूले चीनले द्रुत ढङ्गले आफ्नो परमाणु क्षमता विस्तार गरिरहेको, सैन्य आधुनिकीकरणबारे अपारदर्शी हिसाबले निर्णय […]
June 13, 2021 N20LeaveaComment on जिउँदो खेलाडीलाई कान्तिपुर टिभीले मृत्यु भएको घोषणा गरिदिएपछि….यस्तो छ घट्ना
जेठ ३१, काठमाण्डौ फुटबल हेरिरहेका सबै दर्शक स्तब्ध हुने एउटा घटना भयो आज कोपनहेगनमा भइरहेको युरो कपको खेलका क्रममा। डेनमार्क र फिनल्यान्डबीच खेल भइरहेको थियो। मध्यान्तर हुन पाँच मिनेट जति बाँकी थियो। डेनमार्कका स्टार खेलाडी क्रिस्टियन एरिक्सन आफूकहाँ बल पास हुँदा एकाएक ढले। त्यसपछिका केही दृश्य साह्रै मार्मिक थिए। डेनमार्कका सबै खेलाडीहरुले चारैतिरबाट उनलाई घेरे। […]
जेठ २७, एजेन्सी भनिन्छ संसार नै प्रेममा अडिएको छ । तर कुन बेला कोसंग अनायास प्रेम बस्छ त्यसको पनि कुनै ठेगान हुँदैन । हालै भारतमा एउटा अनौठो घटना भएको छ । अनलाइन क्लासमा पढाउने शिक्षक र विद्यार्थीबीच भएको प्रेम विवाहमा परिणत भएको छ । भारतको बिहारमा रहेको भागलपुरमा एक शिक्षकले अन्लाइन क्लास पढाउँदा पढाउँदै विद्यार्थीसँग […]
June 9, 2021 N20LeaveaComment on बाटोमा उभिएका ब्यक्तिले फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई हाने झापड, त्यस पछि के भयो ?
२६ जेष्ठ, काठमाडौं फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोंमाथि दक्षिणी फ्रान्सको भ्रमणका क्रममा एक व्यक्तिले झापड हानेका छन्।बाटोमा उभिएकाहरुसँग कुराकानी गरिरहेका बेला ती व्यक्तिले राष्ट्रपति माक्रोंलाई झापड हानेका थिए। घटना लगत्तै राष्ट्रपति माक्रोंको सुरक्षा टोलीले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको बिबिसीले जनाएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ। सरकारले चुरेअन्तर्गकाे सिद्धबाबा डाँडा काटिँदैछ भन्ने विषयमा […]
June 9, 2021 N20LeaveaComment on किम जोङ उनले ल्याए नेपाललाई समेत धक्का पर्ने यस्तो नयाँ कानुन, यस्तो छ ।
एजेन्सी, जेठ २६ उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उनले आफ्ना नागरिकलाई विदेशी फिल्म हेरे मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने कानुन ल्याएका छन्। बिबिसीका अनुसार केही दिनअघि लागु भएको कानुनअनुसार कोही व्यक्ति ठूलो मात्रामा उत्तर कोरियाली जापानी, अमेरिकी र दक्षिण कोरियाली फिल्मका सिडी, भिसिडीसहित भेटिए मृत्युदण्ड हुनेछ भने कोही त्यस्ता फिल्म हेर्दाहेर्दै पक्राउ परे १५ वर्षसम्म जेल सजाय […]
June 7, 2021 N20LeaveaComment on विश्वकै सबैभन्दा लामो कार, जसमा स्वीमिङ पुलदेखि हेलिप्याडसम्मको सुविधा छ
जेठ २४, काठमाडौं विश्वमा धेरै आबिष्कारहरु भइरहेका छन् । विश्वमा पत्याउनै मुश्किल गरी प्रविधिको विकाश भइरहेको छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न छिटो र सजिलो गरी पुग्न सकिने साधन हो कार । विश्वमा यस्तो कार पनि छ, जुन कार हामिले देखेका र सुनेका पनि छैनौं । अमेरिकामा विश्वकै सबैभन्दा लामो कार रहेको छ […]
May 25, 2021 N20LeaveaComment on राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई सेनाले लियो नियन्त्रणमा, रिहाई गर्न माग यस्तो छ कारण
११ जेठ पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक मालीको सेनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार गत भदौमा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको मालीको सेनाले सोमबार अन्तरिम सरकारका राष्ट्रपति बाह एनडअ, प्रधानमन्त्री मोक्तार ओउने र रक्षामन्त्री सोउलेमेन डोउकोरेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूलाई राजधानी बामाकोबाट लगेर काटीस्थित सेनाको गणमा राखिएको छ। सरकार पुनर्गठन […]
May 25, 2021 N20LeaveaComment on सैन्य ‘कू’ : ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ८ सय १८ पुग्यो, यस्तो छ घट्ना
जेठ ११, काठमाण्डौ म्यानमारमा सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या आठ सय १८ पुगेको छ । हिजो तीन जनाको ज्यान गएको हो । गएको फेब्रुअरी १ तारिखमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि अहिलेसम्म आन्दोलन भइरहेको छ । सैनिक सरकारले अहिलेसम्म चार हजार दुई सय ९६ जनालाई पक्राउ गरेर थुनामा […]
लिथुआनिया गइरहेको र्‍यानएयरको जहाज बेलारुसद्वारा ‘हाइज्याक’ !
May 24, 2021 N20LeaveaComment on लिथुआनिया गइरहेको र्‍यानएयरको जहाज बेलारुसद्वारा ‘हाइज्याक’ !
काठमाडौं। ग्रिसबाट लिथुआनियातर्फ गइरहेको र्यान एयरको एक जहाजमा बम भएको भन्दै आतंक फैलाएर आफ्नो देशमा अवतरण गर्न बाध्य पारेको बेलारुसमाथि ‘राज्य आतंकवाद’ फैलाएको आरोप लगाइएको छ । युरोपेली संघले यो बलजफ्ती अवतरणलाई राज्यबाट गरिएको ‘हाइज्याक’ भएको ठहर गरेको छ । आइतबार विमानमा बम भएको भन्दै बेलारुसतर्फ डाइभर्ट गरिएको विमानमा एक पत्रकारले यात्रा गरिरहेको र उनैलाई […]
दर्दनाक घट्ना : सानो बालक सहित १४ जनाको ज्यान गयो, घट्ना यसरी भएको थियो
May 24, 2021 N20LeaveaComment on दर्दनाक घट्ना : सानो बालक सहित १४ जनाको ज्यान गयो, घट्ना यसरी भएको थियो
जेठ १०, काठमाण्डौ इटलीको माजीओरी तालनजिकै एउटा केबलकार खस्दा १४ जनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा एक जना बालकको पनि ज्यान गएको छ भने अर्का एक बालक गम्भीर घाइते भएका छन्। स्ट्रेजा सहरबाट मोटारोने पर्वततर्फ यात्रु ओसारिरहेका बेला केबलकार दुर्घटनामा परेको बीबीसीले जनाएको छ । ज्यान गुमाउने १४ जनामध्ये पाँच जना इजरायलका नागरिक भएका त्यहाँको […]